ပြည်တွင်းသတင်း Archives - Myitter
သိန်း ၅၀၀၀ ကံထူးရှင်ပေါ်ထွန်းလာပါပြီ…
June 1, 2020 Myitter 0
သိနျး ၅၀၀၀ အောငျဘာလထေီဆုကွီးကို တပျမတျောသား ဗိုလျမှူး မြိုးမွတျကြျောက ဆှတျခူးရရှိခဲ့ပါတယျ။ မိသားစုနဲ့ တကှ ထပျတူ ဝမျးသာပါတယျ… Congratulations…. zawgyi<< သိန်း ၅၀၀၀ အောင်ဘာလေထီဆုကြီးကို တပ်မတော်သား ဗိုလ်မှူး မျိုးမြတ်ကျော်က ဆွတ်ခူးရရှိခဲ့ပါတယ်။ မိသားစုနဲ့ တကွ ထပ်တူ ဝမ်းသာပါတယ်… Congratulations…. […]
တရုတ်နိုင်ငံက အတည်ပြုလိုက်ပြီ။ ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်မှု/စမ်းသပ်မှုအတွက် သဘောတူလိုက်ပါပြီ။ ကိုဗစ် ၁၉ ကာကွယ် ကုသရေးအတွက် ထိုးဆေးကို အတည်ပြုလိုက်ပြီ။ ဆင်ဟွာသတင်း (ဘေဂျင်း။ ၁၄-၄-၂၀) တရုတ်ပြည်တွင် ဆေးရုံများမှာ ကိုဗစ် ၁၉ အတွက် ကာကွယ် ကုသဆေးအတွက် အသုံးပြုရန် […]
ဖင်ခေါင်းကျယ်တဲ့ ရွာလား…? လူပီသတဲ့ ရှာလား…? ဆုံးဖြတ်ပေးပါ။
ကျေးရွာကို စပိတ်လိုက်တယ်။နံနက်၇နာရီမှ၉နာရီအထိ ဆေးဝါးစားစရာ လိုရာထွက်ဝယ်ဖွင့်ပေးထားတယ်။ မနက်၉နာရီ ထိုးရင်တော့ အဝင် အထွက်အားလုံးပိတ်လက်မခံ။ဒါကို အခြားရွာက ဈေးလာရောင်းကြသော အလည်လာကြသော လူအချို့က လက်ဆေးပါ ဆိုတော့ မဆေးနိုင်ဘူး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံတယ် ရောဂါမရှိဘူးတဲ့။ကျုပ်တို့ကလဲ ခပ်ချေချေပဲ မဆေးမဝင်နဲ့ပေါ့ ဖွင့်မပေးနိုင်ဘူး ဆိုတော့…။ ဘယ်ရွာမှ မလုပ်ဘူး သူတို့ရွာကြမှ အတော် […]
“မကြာမှီ ပြည်မြို့ကိုပြန်လာမည်” မြန်မာ့ဆေးပညာသမိုင်းမှာ”ဒေါက်တာ”ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးသွေးနဲ့ရေးထိုးခဲ့ပြီ။
“မကြာမှီ ပြည်မြို့ကိုပြန်လာမည်” မြန်မာ့ဆေးပညာသမိုင်းမှာ”ဒေါက်တာ”ဆိုတဲ့စကားလုံးနှလုံးသွေးနဲ့ရေးထိုးခဲ့ပြီ။ “ရန်သူ ဖြူသလား၊မဲသလားသဲကွဲမသိ၊မမြင်ရဘူး” ကျမသိတယ်၊နားလည်တယ် ကျမဆန္ဒအလျောက်တိုက်ပွဲဝင်မယ် ကျမတတ်ထားတဲ့ဆေးပညာ အသပြာအတွက်မဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ရှင့် ရဲရဲတောက်စကား၊နှလုံးသားကစကားအားပါးပါး··ကြ က်သီးထတယ်။ ဆရာဝန်သုံးယောက်၊ ဆောင်ရွက်မှသာ ရတဲ့ကေ့(စ်)ကို “ဆရာမတယောက်တည်းဖြစ်အောင်လုပ်မယ် မင်းတို့ဖယ်ကြ၊အပြင်သွားကြမင်းတို့ကိုရောဂါအကူး မခံနိုင်ဘူးကူးချင်းကူး ဆရာမသာကူးပလေ့စေ” ရဲရဲတောက်စကား၊နှလုံးသားကစကားအားပါးပါး··ကြ က်သီးထတယ်။ မုဆိုးခြေထောက် ဆူးမကြောက်သလိုဆရာဝန်ထံ လူနာ့ဆီကပိုးကူးတာမဆန်းပါဘူး ကူးခဲ့ရင်··· ကူးခဲ့ရင်··· […]